Where ( eg. Alone, Hlaing,Yankin...) Ahlone Ahlone Bahan Botahtaung Dagon Dagon Seikkan Dala Dawbon East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Insein Kamayut Kyauktada Kyeemyin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingalar Taung Nyunt Mingalardon North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Gyi Kha Naungto Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Tarmwe Thaketa Than Lyin Thingangyun Yankin
Welcome to Ahlone
Ahlone Township is located in the western part of Yangon. The township comprises eleven wards and shares borders with Sanchaung township and Kyeemyin Daing township in the north, the Yangon river in the west, Dagon township in the east, and Lanmadaw township in the south.
Over 1,400 businesses situated in this area, over 22,600 employees working in these respective businesses, its united with 11 Wards, Area 2.7 sq km – Population Density: 20585.4/sq km, Total Population 55,482 people living in this township. Ahlone has six primary schools, one middle school and seven high schools. Postal codes 11121
Thakin Mya Park is the major park in the township. This park was reconstructed in 2014 and before was an abandoned park for many years.
Ahlone wharves administered by Myanmar Port Authority are located in southwestern Ahlone. Asia World has also operatedaport in Ahlone since 2000. Ahlone International Port Terminal 1 is situated near to downtown of Yangon City, on the east bank of Yangon river. Modernized and dedicated facilities designed to handle container and general cargo withanew first-class wharf facility supported byatotal terminal operation area of 190,000 sq,m. AIPT(1) wharf is (600 m x 30 m) allows (3) vessels up to DWT (20,000) asaberthing area to utilize conveniently alongside. AIPT(1) main gate has been built including offices for the convenience of port management for your valuable cargo.
While traditionally quite an industrial area, there are increasing condominium and housing options on this side of town, and they provide very good access to the downtown area. In fact, the roads through Ahlone are often used asabypass through to the city when Pyay and Kabar Aye Pagoda roads are busy. The Indonesian school and the Japanese school are also here, so it isapopular location for those nationalities, and there are also many embassies such as the Chinese, Pakistan, Sri Lanka, Malaysia and Laos Embassies that are located close by but just into neighbouring Dagon Township.
အလုံမြို့နယ် သည် ရန်ကုန်မြစ်နှင့် ကပ်လျက်တည်ရှိသည့် အားလျော်စွာ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများ ဆိုက်ကပ်သည့် ဆိပ်ကမ်း သုံးခု အစီအရီ တည်ရှိကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း၊ အမှတ်(၁) အလုံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းနှင့် မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း တို့ဖြစ်သည်။ နယ်နိမိတ်တစ်ဘက်၌ ရန်ကုန်မြစ်ရှိနေပြီး ကျန်နေရာများတွင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်နှင့် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် တို့က ဝန်းရံထားသည်။
ပါးစပ်သမိုင်းအလိုအရ မုံရွာမြို့အလုံရပ်မှလူများ ပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့ကြသည်ကို အကြောင်းပြုပြီး အလုံရပ်ဟု အမည်တွင်သည်။ လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးချိန်တွင် အလုံတိုက်နယ်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ နယ်မြေလုံခြုံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီလက်ထက်တွင် အလုံဒေသစိတ်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရက ရန်ကုန်တိုင်းကို မြို့နယ် (၂၉)ခု ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရာ၌ အလုံမြို့နယ် ဟု သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်မှာ ယခုတိုင်ဖြစ်ပြီး နယ်မြေအကျယ်အဝန်းမှာ ၁ ဒဿမ ၀၄ စတုရန်းမိုင် ဖြစ်သည်။ မြေအနေအထားမှာ ပြန့်ပြူးပြီး အရှေ့ဘက်မှ အနောက်ဘက်သို့ နိမ့်လျှောကျဆင်းသွားသည်။
အလုံမြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက် (၁၁)ခု ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့မှာ စောရန်ပိုင် (တောင်)၊ စောရန်ပိုင် (မြောက်)၊ စောရန်ပိုင် (အရှေ့)နှင့် စောရန်ပိုင် (အနောက်) ရပ်ကွက်၊ ဧရာဝတီရပ်ကွက်၊ ကရင်ခြံရပ်ကွက်၊ လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက်၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ ဂဠုန် ရပ်ကွက်၊ ဌာနာရပ်ကွက်တို့ ဖြစ်သည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ စာရင်းများအရ ၎င်း ရပ်ကွက်များတွင် အိမ်ခြေ (၃ ၂၃၈) ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၀ ၉၂၈)စု နေထိုင်ကြသည်။ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အကုန်ဖြစ်သည့် မတ်လကုန်တွင် (၅၄ ၈၄၃)ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းနှစ်အတွင်း မြို့နယ်တွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူ (၆၉၆)ဦး ရှိပြီး ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာသူ (၁ ၁၄၄)ဦး ရှိခဲ့သည်။
စာတိုက်သင်္ကေတ အမှတ်မှာ (၁၁၁၂၁) ဖြစ်သည်။ မြို့ပတ် ရထားလမ်းပိုင်းမှာ ဦးလူနီလမ်းအနီးမှ ဗဟိုလမ်းအထိ ဖြစ်သည်။ ဘူတာရုံမှာ အလုံဘူတာရုံ ဖြစ်သည်။
Business Collection Group (BCG) ၏ အချက်အလက်များအရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း (၁ ၄၀၀)ကျော် ရှိပြီး လုပ်သားအင်အား (၂၂ ၆၀၀)ကျော်ခန့် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။ ထင်ရှားသည့် အလုပ်ရုံများမှာ ယုဇနအအေးခန်းနှင့် Bio Plus ရေသန့် အလုပ်ရုံတို့ဖြစ်သည်။
ပညာရေးကဏ္ဍအနေဖြင့် မူလတန်းကျောင်း (၆)ခု၊ အလယ်တန်းကျောင်း (၁)ခုနှင့် အထက်တန်းကျောင်း (၇)ခု ရှိသည်။ အစိုးရမူကြိုကျောင်း (၂)ကျောင်း ရှိသည်။ အ.ထ.က(၄) အလုံသည် သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ထင်ရှားသည့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆေးရုံမှာ အကယ်ဒမီဆေးရုံ ဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍအနေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စက်ရုံတစ်ခု နှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံတို့ တည်ရှိသည်။ ဓာတ်ဆီ၊ဒီဇယ်ဆီ အရောင်းဆိုင် (၃)ဆိုင် ရှိသည်။ Htoo Petrol၊ Royal Victory နှင့် Max Energy တို့ ဖြစ်သည်။ အိမ်သုံး ဓာတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင် (၂)ခု ရှိသည်။ မော်တော်ယာဉ်သုံးဓာတ်ငွေ့အရောင်းဆိုင် အလုံ (၀၀၃)၊ အလုံ (၀၁၃)နှင့် အလုံ (၀၂၉) စုစုပေါင်း (၃) ဆိုင် ရှိသည်။
သစ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအနေဖြင့် သစ်သားထည် ပရိဘောဂစက်ရုံ အမှတ် (၁)၊ (၂)နှင့် (၃) တို့ တည်ရှိသည်။ အမှတ်(၂) သစ်ခွဲစက်တည်ရှိသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကဘဏ် (၁၄)ခုနှင့် အစိုးရဘဏ် (၁)ခု ရှိသည်။
ထင်ရှားသည့် ပန်းခြံမှာ ဧရာဝတီရပ်ကွက် ကမ်းနားလမ်းရှိ သခင်မြပန်းခြံ ဖြစ်ပြီး ၎င်းပန်းခြံတဝိုက်တွင် ဝိုင်ဘီအက်စ် ဘတ်စ်ကား ဂိတ်ဖျားများ ထားရှိသည်။ ဘတ်စ်လိုင်း ဆုံမှတ်ဖြစ်သည့် ပန်းခြံသို့ ရောက်သော ဘတ်စ်လိုင်းများမှာ ၁၄၊ ၁၉၊ ၂ဝ၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၃ဝ၊ ၄ဝ၊ ၄၁၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈၊ ၅၉၊ ၈၉၊ ၉၄၊ ၉၈ တို့ ဖြစ်သည်။
ထင်ရှားသည့် ဟိုတယ် (၄)လုံး တည်ရှိပြီး အခန်းပေါင်း (၁၇၃)ခန်းပါ ဂရင်းယူနိုက်တက်ဟိုတယ်၊ အခန်းပေါင်း (၇၆)ခန်းပါ ဆာကူရာဟိုတယ်၊ အခန်းပေါင်း (၅၉)ခန်းပါ ဟိုတယ် 99နှင့် အခန်းပေါင်း (၇၄)ခန်းပါ ဟိုတယ်ကံ့ကော်တို့ဖြစ်သည်။
စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဈေးများဌာန လက်အောက်တွင် ရှိသည့် ဈေးများမှာ ဆင်မင်းဈေးနှင့် အလုံဈေးတို့ ဖြစ်သည်။
Myanma Industrial Port [MIP]
Thalun Int'l School
Population In Conventional HouseHolds 48,826 48,826
Number Of Convetional Households 10,997 10,997
•In Ahlon Township, there are more females than males with 82 males per 100 females.
•All of the people in the Township live in urban areas.
•The population density of Ahlon Township is 20,434 persons per square kilometre.
•There are 4.4 persons living in each household in Ahlon Township. This is equal to the Union average.
Productions 17 406
Retails 356 1721
Wholesales 80 5461
Services 928 13551
Trading 37 1511
All about Ahlone
: U Ye Lwin
: +95973061147
: Daw Yin Yin Myint
: +9592504 98353
: Daw Nwe Nwe Win
: +9594500 35587
Unified Technology Solution
Category : Telecommunication Suppliers & Equipment
Address : 361, Lower Kyee Myin Daing Rd., Near Academy Hospital,
Phones : 01-223161, 09-450450706, 09-440888391
Category : Piling Services
Address : 108, Hnin Si Gone St., Corner of Baho Rd., Saw Yan Paing (East) Ward,
Phones : 01-2318955
Address : 43/44, Rm 5/B,5Flr, Strand Rd., Sin Min Ward,
Phones : 09-695620435, 01-2302638, 09-962393212
Category : Air Compressor Sales & Manufacturers
Address : 202 / A, Lower Kyee Myin Daing Rd.,
Phones : 09-259335511, 09-259335522, 01-2302082